Nagarik Shukrabar - अलग/फरक
सोमबार, २० मङि्सर २०७८, ०६ : २४
आफ्नी नातिनी लोगनको ह्यारी पोटर मोह देखेर रुबी र डेभ लनलपले आँगनमा उनका लागि ३५० स्क्वायर फिटको ह्यारी पोटर पढ्ने स्कुल निर्माण गरिदिएका छन्। यो स्कुल ठीक त्यस्तै बनाइएको छ, जसमा ह्यारी पोटरले पढ्ने गरेका थिए।
राष्ट्रपति गिज्याइएको किताब भाइरल
ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई किन सम्मान गर्नुपर्छ र किन उनी विश्वासयोग्य छन् भनी लेखिएको १९० पृष्ठको किताब यतिबेला भाइरल भएको छ।
मृगौलाको समस्या हो कि भन्या त तिम्ल्या पो !
अमेरिकाको साउथ डकोटाकी एउटी महिला तल्लो पेट दुखेर हैरान भइरहेकी थिइन्। उनलाई लाग्यो, पक्कै मृगौलाको समस्याले दुःख दिन थाल्यो। तसर्थ, जँचाउन अस्पताल पुगेकी थिइन्, डाक्टरले उनलाई भने, ‘बधाई छ, तपाईं तीन सन्तानकी आमा बन्न लाग्नु भएको छ।’
चर्चभित्र गल्फ कोर्स
हिजोआज बेलायतका चर्चहरु खाली हुन थालेका छन्। कारण ? त्यहाँका क्रिस्चियनहरुलाई चर्च जानु र धर्ममा विश्वास गर्नु वाहियात लाग्न थालेको छ। त्यसैले त ठूल्ठूला चर्च भवनहरुमा कम मानिसहरु जान थालेका छन्। उसो भए चर्च भर्ने नयाँ तरिका के हुन्छ होला ?
इराकी राजधानी बगदादमा गालाबारुदको दैनिक आवाज एउटा सङ्गीतजस्तो निरन्तर आउने आवाज बन्न पुगेको छ। यो क्रम दशकौँ भइसकेको छ। यस्तोमा एक जना बगदादी माजेद अब्देनोअरले अनौठो सांगीतिक बाजा बनाएका छन्।
कृत्रिम जिब्रोबाट रक्सीको स्वाद
धेरै कुरा कृत्रिम हुन सक्छन् तर जिब्रो ? कमन यार ! यस्तो पनि हुनसक्छ ? तर बेलायतमा यस्तै भइरहेको छ। गएको मंगलबार वैज्ञानिकहरुले कृत्रिम ‘जिब्रो’ सार्वजनिक गरेका छन्। यो जिब्रोको खासियत के छ भने यसले रक्सीको स्वाद परख गर्न सक्छ।
२३ लाख फ्याँक्ने मानिस
एउटा पुरानो जुत्ता फ्याँक्नका लागि रद्दीको टोकरीछेउ राखिएको थियो। फोहोर लिन आउने मानिसले त्यो जुत्ता फोहोरको चाङ राखिएको ट्रकमा जुत्ता फ्याँकिदियो।
जेलबाट भाग्न छोरीको रुप
ब्राजिलमा लागु औषध दुरुपयोग अपराधमा पक्राउ परेका ड्रग माफियाले जेलबाट भाग्न अनौठो काइदा अपनाएका छन्। उनले छोरीकै जस्तो अनुहारको मास्क बनाए, हाउभाउ र गतिविधि देखाए र निस्कन ठीक परे।
तपाईंले मासुविरोधी प्रदर्शन त देख्नु भएको होला ताकि मानिसहरु मासुतर्फ बढी नै आशक्त नहोऊन्। मासुप्रतिको आशक्तिका कारण सर्वसाधारणले निर्दोष जनावर मारिरहेका छन् भन्ने तिनको तर्क हुने गर्छ।
सात वर्षे केटाको ५२६ दाँत
भारतका एक जना सात वर्षे बालकको मुखमा ५२६ वटा दाँतका टुक्रा फेला परेको छ। बच्चोले दाँत असाध्य दुखेको गुनासो गरेपछि उसका अभिभावकले अस्पताल पु-याएका थिए। जसै चिकित्सकहरुले बच्चोको मुखको एक्स रे गरे, चकित परे किनभने त्यहाँ सामान्य रुपमा बच्चाहरुको दाँत थिएन। पाँच सयभन्दा बढी दाँत लाइन लागेका थिए।
खेल्दाखेल्दै ज्यान गयो
खेलका क्रममा घाइते भएका दुई बक्सिङ खेलाडीको ज्यान गयो। खेलका क्रममा गम्भीर घाइते भएका अर्जेन्टिनाका मुक्केबाज ह्युगो सान्टिलन र रुसी मुक्केबाज म्याक्सिम दादासेभको मृत्यु भएको हो।
छोरीको बिहेमा आमा तरुनी देखिएपछि...
छोरीको बिहेको माहोल छ। कोभन्दा को कम हुनै प¥यो। त्यसमाथि आहान नै छ, ‘छोरीभन्दा आमा तरुनी देखिनुपर्छ।’
६ वर्षे युट्युबरको ९ अर्बको घर
दक्षिण कोरियाकी एक ६ वर्षीया बालिकाले हालै साढे नौ अर्ब कोरियाली वनमा घर किनेपछि उनी चर्चामा छाएकी छन्।
सेभ्गी सुलेर्लीलाई एक दिन अचम्मैसँग ढाड दुख्यो। किन यस्तो भयो भनेर उनले पत्तो पाएकी थिइन्। एक दिन उनी एउटा चुम्बक खेलाइरहेकी थिइन्। त्यो चुम्बक खेलाउँदै जाँदा ढाडमा पुगेर टक्क अडियो !
सामान्यतः तपाईं कसरी बस्नु हुन्छ ? स्त्री हुनुहुन्छ भने गोडा जोडेर बस्नु हुन्छ अनि पुरुष हुनुहुन्छ भने गोडाफाट शैलीमा, हैन त ?
तपाईंले सेलिब्रिटी भएका मानिस देख्नु भएको होला, कहिलेकाहीँ कुकुर र बिराला वा अन्य जनावर पनि सेलिब्रिटी हुन्छन् तर बेलायतमा यतिबेला एउटा घुँडा सेलिब्रिटी बन्न पुगेको छ।
ससुरो न्युडिस्ट परेपछि...
पश्चिमा संसारमा न्युडिस्ट एउटा लोकप्रिय व्यवहार हो तर सबै पश्चिमाले यसलाई रुचाउँछन् भन्ने छैन। यहाँ बताइदिई हालौँ, न्युडिस्ट भनेको नागाबाबा भनेजस्तै हो। उनीहरु नाङ्गै हिँड्न, बस्न रुचाउँछन्।
भाइरल बनेको जिन्दगीका ३८ सत्य वचन
जन्मदिन कसरी मनाउने त्यो मान्छेपिच्छे फरक धारणा हुन्छ। बेलायतमा ट्वीटरका जागिरे डिक्लन कासिन ३८ वर्ष पुगेपछि केही सोच्न बाध्य भए। उनले जीवनभर सिकेका ३८ महत्वपूर्ण शिक्षा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए।